ဇှနျ 2019 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
637652 Views so far
Month: ဇှနျ 2019
ဇှနျ 28, 2019 နေ့
မိမိတို့အိမ်၏ တည်နေရာကို လိုက်၍ ဆီလျော်သော အရောင်များကို နံရံ ဆေးသုတ်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းစေရန် မင်္ဂလာရှိသော ရုပ်ပုံများ၊ ပန်းချီများ၊ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အရောင်သည် ဓာတ်ကြီးငါးပါး ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များသာဖြစ်သည်။ သစ်သားဓာတ် – အညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်။ မီးဓာတ် – အနီ၊ အ၀ါ၊ လိမ္မော်ရောင်များ။ သတ္တုဓာတ် – အဖြူ၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ ကြေးနီရောင်။ မြေကြီးဓာတ် – အ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့ ။ ရေဓာတ် – အပြာ၊ ခရမ်းရောင်၊ အနက်ရောင်။
အကောင်းဆုံး အရောင်တွဲများ – ခရမ်းရောင်ရင့်ရင့် နှင့် ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင်၊ အနီရောင်တောက်တောက်နှင့် ရွှေရောင်။
ကောင်းသော အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အညိုနှစ်ဆနှင့် အနီ၊ အနီနှစ်ဆနှင့် အ၀ါ၊ အ၀ါနှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူနှစ်ဆနှင့် အပြာ။
ရှောင်ရမည့်အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့်အနီ၊ အနီ နှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူ နှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အစိမ်းနှစ်ဆနှင့် အ၀ါ၊ အ၀ါ နှစ်ဆနှင့် အပြာ။
ရေသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမှု၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ရေကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲတတ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝမည်။ ဖုန်းရွှေပညာတွင် ရေက အရေးကြီးသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၄၃ အထိ ရေကိုမြောက်အရပ်၊ အရှေ့အရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်၊ အနောက်တောင်အရပ် တွင်ထားပါက မင်္ဂလာရှိ၏။ အရှေ့နှင့် မြောက်အရပ်များက အကောင်းဆုံး နေရာများ ဖြစ်၏။ ထိုနေရာများတွင် ရေကန်၊ ရေတံခွန်၊ ရေပန်းများထားပါ။ မိမိခြံတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်းမှာသော်လည်ကောင်း ထိုနေရာများတွင်သာ ရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာများကိုထားပါ။
ရေနဂါး (Water Dargon)
ရေကန်၊ ရေပန်း၊ ရေတံခွန်များကို မှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားလျှင် ရေနဂါးစောင့်ရှောက်သည် ဟု အယူအဆရှိ၏။ ရေနဂါးစောင့်ရှောက်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ ပိုမိုမြန်ဆန် တိုးတက်သည်။
ကြာပန်း (Water Lilies)
ကြာပန်းသည် နိမိတ်ကောင်းသော ပန်းဖြစ်၏။ ၄င်းသည် စစ်မှန်ဖြူစင်ခြင်း သဘောကိုဆောင်၏။ ရေကန်ထဲမှ ငါးများကို ငှက်သတ္တ၀ါ စသည်တို့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ကြာပန်းများကို ရေကန်တွင် စိုက်ထားရ၏။
ခြံမြေအလွတ်ရှိလျှင် ခြံ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရေတံခွန်၏ အရွယ်ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ။ အိမ်ကြီးလျှင် ရေတံခွန် ကြီးကြီး၊ အိမ်သေးလျှင် ရေတံခွန်သေးသေး လုပ်ပါ။ ရေတံခွန်ကို မိမိပြတင်းပေါက် (သို့) တံခါးမမှ ကြည့်လျှင် မြင်နိုင်ပါစေ။ သို့မှသာ လာဘ်ကောင်းသည့် နိမ်ိတ်ဖြစ်မည်။ ရေတံခွန်စီးကျသံကလည်း သာသာယာယာ ညင်ညင်သာသာ ရှိပါစေ။ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲသော အသံများ မပေါက်စေရ။ ရေတဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းပါစေ။ အမြန်နှုန်းနှင့် စီးမကျစေရန်လည်း သတိပြုပါ။
လှိုင်းတွန့်များ (Wavy Lines)
လှိုင်းတွန့်လိုင်းများသည် ရေကို ကိုယ်စားပြု၏။ ထိုဒီဇိုင်းမျိုးကို မြောက်၊ အရှေ့၊ အရှေ့မြောက် အရပ်တို့တွင် ရှိပါစေ။ အဖြားအရပ်များတွင် မထားပါနှင့်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကံ (Wealth Luck)
ဖုန်းရွှေပညာတွင် ကံကောင်းခြင်း ပုံစံ (၈)မျိုးရှိသည့် အနက် ၁ မျိုးဖြစ်သည်။ ဖုန်းရွှေဓာတ်မှန်လျှင် ဤကံထွန်းကားတတ်သည်။
ပိုက်ဆံ “ချီ” ဓာတ်ကို ညို့ငင်ယူဆောင်ရန်အတွက် “ခြေထောက်သုံးချောင်းပါသော ဖားရုပ်” သို့မဟုတ် အလည်တွင်လေးထောင့်ကွက်အပေါက်ပါသော တရုတ်ဒင်္ဂါးတို့ကို သုံးရ၏။ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် အပင်များထားခြင်း၊ မြောက်အရပ်တွင် ရေနှင့် ပတ်သက်သော အရာများထားခြင်းတို့သည်လည်း လာဘ်ရွှင်စေ၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ကား “ရေနဂါး” ထားခြင်းဖြစ်၏။ “ရေနဂါး” ပုံသည် လာဘ်ရွှင်စေ၏။
ချမ်းသာအိုး (Wealth Vase)
ချမ်းသာအိုးကို မြေကြီး (သို့မဟုတ်) သတုဖြင့်လုပ်ရသည်။ မြေကြီးနှင့် လုပ်သောအိုးဟူသည် ကြွေအိုး သို့မဟုတ် သလင်းကျောက် အိုးများဖြစ်၏။ သတုအိုးကား ကြေးနီ၊ ငွေ၊ ရွှေ အိုးများ ဖြစ်၏။ အိုး၏ တန်ဖိုး ကြီးလေလေ မင်္ဂလာပိုရှိလေ ဖြစ်၏။ အိုးထဲသို့ သလင်းကျောက်၊ နီလာ ခရမ်းစသည်တို့ ထည့်ထား၍လည်း ရ၏။ ဤချမ်းသာအိုးကို လူမမြင်အောင် ဘီရိုထဲမှာ ဖွက်ထားရမည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မထားရ။ ထိုသို့ထားလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများမြောပါသွားတတ်သည်။
အိမ်မှထွက်သမျှရေများကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သော ရေတွင်းတစ်ခု ရှိရမည်။. ထိုရေတွင်းမှ ရေများက မိမိ၏ မင်္ဂလာ ရှိဆုံး အရပ် သို့ ထပ်မံစီးထွက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ဤအစီအရင်ကို “ရေနဂါး ဂန်္တ၀င်” နည်းဟု သုံးကြသည်။
အနောက်အရပ်တွင် သတ်္တု “ချီ” ဓာတ်ကို ရအောင်လုပ်နိုင်လျှင် နောက်မျိုးဆက် သားသမီးများအတွက် ကောင်းသည်။ဤနေရာတွင် အဖြူရောင် သတ်္တု ပစ်္စည်းများထားပါ။ ခေါင်လောင်းများထားပါ။ ကြေးစည်ထားပါ။ ကြေးစည်ကို အိမ်အနောက်ဘက်တွက် မကြာခဏတီးပေးပါ။
ကျားဖြူ ( White Tiger)
ကျားဖြူသည် အိမ်ကို စေင့်ရှောက်တတ်သည်။ ကျားနှင့်တွဲဘက်က နဂါးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျားမရှိလျှင် နဂါးက နဂါးအစစ်မဟုတ်။ ကျားရုပ်ကို အိမ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရမည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းထက် ဘယ်တော့မှ ပိုမမြင့်စေရ။ ကျားရှိသော အခြမ်းက အမြဲတမ်း ပိုမြင့်နေစေရမည်။ နဂါးအရုပ်ကိုမီးထိန်ထိန်ထွန်းပေးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် အိမ်ထဲမှာ ကျားရုပ်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစောင့်သောကျားရုပ်နှင့် နဂါးရုပ်သည် တကယ့်တွဲဖက်ညီသော အစောင့်အရှောက်များဖြစ်၏။
လေသာဆည်းလည်း ( Wind Chimes)
အိမ်တွင် လေသာဆည်းလည်းကို မတပ်မဖြစ် တပ်ဆင် ချိတ်ဆွဲရမည်။ ဆည်းလည်းမြည်သံက ဖုန်းရွှေကောင်းဖြစ်၏။
ပြတင်းပေါက်များ ( Windows)
ပြတင်းပေါက် လုံးဝမရှိလျှင် ဖုန်းရွှေမကောင်းပါ။ ထိုနည်းတူ ပြတင်းပေါက်များလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အရေအတွက် ကား ၃း၁ ဖြစ်ရမည်။ တံခါးတစ်ပေါက ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်။ ပြတင်းပေါက်ကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်ရမည်။ အတွင်းဖွငါ့ ပြတင်းပေါက်ကို ရှောင်ပါ။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် တည့်တည့်တွင် ပြတင်းပေါက် မရှိစေရ။ တံခါးမ မှ ၀င်လာသောငွေများ ပြတင်းပေါက်မှ တခါထဲ ထွက်ကုန်၍ မည်သည့်အခါမှ ငွေစုမိဆောင်းမိရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဓာတ်ကြီးငါးပါးအနက် တစ်ခုဖြစ်၏။ သစ်သားက ကြီးပွားချမ်းသာသော ဓာတ်ဖြစ်၍ မရှိမဖြစ်ရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်၏ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင်အရပ်တို့တွင် သစ်သား ဓာတ်ရှိဖို့ အရေးကြီး၏။
ဓာတ်ကြီးငါးပါးကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် “၀ူချင်း” ဟုခေါ်၏။ “၀ူ” က “ငါး”ဖြစ်ပြီး “ချင်း”က “ဓာတ်” ဖြစ်၏။ ရေက ဆောင်းရာသီကို စိုးမိုး၏။ သစ်သားက နွေဦးပေါက်၊ မီးကနွေ၊ သတ်္တုက ဆောင်းဦးပေါက်ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီနှစ်ခုကြား စပ်ကူးမတ်ကူးသတိပြုရမည်မှာလေသာဆည်းလည်းကို အရှေ့ (သို့) အရှေ့တောင် အရပ်တွင်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ ၄င်းနေရာက သစ်သားဓာတ်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် သစ်သားဆည်းလည်းချိတ်၍ရ၏။ သတ်္တုဆည်းလည်းများကို အနောက်နှင့်အနောက်တောင်အရပ်တွင် ချိတ်ဆွဲရသည်။ ကြွေဆည်းလည်းကို အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်တွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အိမ်ထဲမှ မကောင်းသောကံများရှိလျှင် မောင်းထုတ်လိုပါကမူ အခေါင်းပါသော သတ်္တုငါးချောင်းဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် စေတီဘုရားပုံပါသော ဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ ၄င်းသည် မကောင်းသော ဓာတ်များကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော စွမ်းအားပိုရှိ၏။
လေသိပ်တိုက်သောနေရာကို ရှောင်ပါ။ ဥပမာ တောင်ထိပ်လိုနေရာများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်မနေသင့်။
လေကသိပ်ပြင်းလျှင် “ချီ” ဓာတ်ကို လွင့်ပါးပျောက်ပြယ်စေနိုင်၍ ဖြစ်၏။ လေပူဖြစ်စေ၊ လေအေးဖြစ်စေ အိမ်ကို လေဒလဟောတိုက်လျှင် မကောင်းပါ။ ထိုလေဒဏ်ကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားနိုင်ရန် လိုအပ်၏။ သလဲကို မြေကြီးဓာတ် စိုးမိုး၏။ ဓာတ်ကြီးငါးပါးနှင့် “ချီ” အမျိုးအစား ငါးခုက ဆက်စပ်နေ၏။
ရေက အောက်ကို စီးဆင်းမြဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှံကျမှာစိုးရ၏။ အန်္တရာယ်ရှိ၏။ သစ်သားက အပေါ်ကို ထောင်တက်၏။ အသက်ဇီဝနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မီးက အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို ပျံ့နှံ့သည်။ အရှိန်ဟပ်သည်။ ပူသည်။ ထိန်းချုပ်ရခက်၏။ သတ်္တုက အတွင်းကို ထိုးဖေါက်၏။ ထက်၏။ ချွန်မြ၏ သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင် ဘေးဖြစ်၏။
မြေကြီးက ဆွဲဆောင်မှုရှိ၏။ ကျေညက်၏။ တည်တံ့၏။ အကာအကွယ်ပြု၏။
မိမိတို့အိမျ၏ တညျနရောကို လိုကျ၍ ဆီလြျောသော အရောငျမြားကို နံရံ ဆေးသုတျနိုငျပါသညျ။ ကံကောငျးစရေနျ မင်ျဂလာရှိသော ရုပျပုံမြား၊ ပနျးခြီမြား၊ ဓာတျပုံမြားကိုလညျး နံရံတှငျ ခြိတျဆှဲနိုငျပါသညျ။ အရောငျသညျ ဓာတျကွီးငါးပါး ကိုယျစားပွုသော အရောငျမြားသာဖွဈသညျ။ သဈသားဓာတျ – အညိုရောငျ၊ အစိမျးရောငျ။ မီးဓာတျ – အနီ၊ အဝါ၊ လိမ်မျောရောငျမြား။ သတ်တုဓာတျ – အဖွူ၊ ရှရေောငျ၊ ငှရေောငျ၊ ကွေးနီရောငျ။ မွကွေီးဓာတျ – အဝါရောငျဖြော့ဖြော့ ။ ရဓောတျ – အပွာ၊ ခရမျးရောငျ၊ အနကျရောငျ။
အကောငျးဆုံး အရောငျတှဲမြား – ခရမျးရောငျရငျ့ရငျ့ နှငျ့ ငှရေောငျ၊ အနကျရောငျနှငျ့ အဖွူရောငျ၊ အနီရောငျတောကျတောကျနှငျ့ ရှရေောငျ။
ကောငျးသော အရောငျတှဲမြား – အပွာနှဈဆနှငျ့ အစိမျး၊ အညိုနှဈဆနှငျ့ အနီ၊ အနီနှဈဆနှငျ့ အဝါ၊ အဝါနှဈဆနှငျ့ အဖွူ၊ အဖွူနှဈဆနှငျ့ အပွာ။
ရှောငျရမညျ့အရောငျတှဲမြား – အပွာနှဈဆနှငျ့အနီ၊ အနီ နှဈဆနှငျ့ အဖွူ၊ အဖွူ နှဈဆနှငျ့ အစိမျး၊ အစိမျးနှဈဆနှငျ့ အဝါ၊ အဝါ နှဈဆနှငျ့ အပွာ။
ရသေညျ ခမျြးသာကွှယျဝသောမှု၏ သင်ျကတေဖွဈသညျ။ ရကေို မှနျကနျစှာ သုံးစှဲတတျလြှငျ စညျးစိမျဥစ်စာ ကွှယျဝမညျ။ ဖုနျးရှပေညာတှငျ ရကေ အရေးကွီးသညျ။ သက်ကရာဇျ ၂၀၄၃ အထိ ရကေိုမွောကျအရပျ၊ အရှအေ့ရပျ၊ အရှတေ့ောငျအရပျ၊ အနောကျတောငျအရပျ တှငျထားပါက မင်ျဂလာရှိ၏။ အရှနှေ့ငျ့ မွောကျအရပျမြားက အကောငျးဆုံး နရောမြား ဖွဈ၏။ ထိုနရောမြားတှငျ ရကေနျ၊ ရတေံခှနျ၊ ရပေနျးမြားထားပါ။ မိမိခွံတှငျသျောလညျးကောငျး၊ အိမျတှငျးမှာသျောလညျကောငျး ထိုနရောမြားတှငျသာ ရနှေငျ့ ပတျသကျသညျ့ အရာမြားကိုထားပါ။
ရနေဂါး (Water Dargon)
ရကေနျ၊ ရပေနျး၊ ရတေံခှနျမြားကို မှနျကနျသောနရောတှငျထားလြှငျ ရနေဂါးစောငျ့ရှောကျသညျ ဟု အယူအဆရှိ၏။ ရနေဂါးစောငျ့ရှောကျလြှငျ စီးပှားဥစ်စာ ပိုမိုမွနျဆနျ တိုးတကျသညျ။
ကွာပနျး (Water Lilies)
ကွာပနျးသညျ နိမိတျကောငျးသော ပနျးဖွဈ၏။ ၎င်းငျးသညျ စဈမှနျဖွူစငျခွငျး သဘောကိုဆောငျ၏။ ရကေနျထဲမှ ငါးမြားကို ငှကျသတ်တဝါ စသညျတို့၏ ဘေးအန်တရာယျမှ ကာကှယျနိုငျရနျ၊ ကွာပနျးမြားကို ရကေနျတှငျ စိုကျထားရ၏။
ခွံမွအေလှတျရှိလြှငျ ခွံ၏ မွောကျဘကျခွမျးတှငျ ရတေံခှနျ၏ အရှယျပမာဏကို ဂရုစိုကျပါ။ အိမျကွီးလြှငျ ရတေံခှနျ ကွီးကွီး၊ အိမျသေးလြှငျ ရတေံခှနျသေးသေး လုပျပါ။ ရတေံခှနျကို မိမိပွတငျးပေါကျ (သို့) တံခါးမမှ ကွညျ့လြှငျ မွငျနိုငျပါစေ။ သို့မှသာ လာဘျကောငျးသညျ့ နိမိတျဖွဈမညျ။ ရတေံခှနျစီးကသြံကလညျး သာသာယာယာ ညငျညငျသာသာ ရှိပါစေ။ ဝုနျးဒိုငျးကွဲသော အသံမြား မပေါကျစရေ။ ရတေဖွညျးဖွညျး စီးဆငျးပါစေ။ အမွနျနှုနျးနှငျ့ စီးမကစြရေနျလညျး သတိပွုပါ။
လှိုငျးတှနျ့မြား (Wavy Lines)
လှိုငျးတှနျ့လိုငျးမြားသညျ ရကေို ကိုယျစားပွု၏။ ထိုဒီဇိုငျးမြိုးကို မွောကျ၊ အရှေ့၊ အရှမွေ့ောကျ အရပျတို့တှငျ ရှိပါစေ။ အဖွားအရပျမြားတှငျ မထားပါနှငျ့။
ခမျြးသာကွှယျဝမှု ကံ (Wealth Luck)
ဖုနျးရှပေညာတှငျ ကံကောငျးခွငျး ပုံစံ (၈)မြိုးရှိသညျ့ အနကျ ၁ မြိုးဖွဈသညျ။ ဖုနျးရှဓောတျမှနျလြှငျ ဤကံထှနျးကားတတျသညျ။
ပိုကျဆံ “ခြီ” ဓာတျကို ညို့ငငျယူဆောငျရနျအတှကျ “ခွထေောကျသုံးခြောငျးပါသော ဖားရုပျ” သို့မဟုတျ အလညျတှငျလေးထောငျ့ကှကျအပေါကျပါသော တရုတျဒင်ျဂါးတို့ကို သုံးရ၏။ အရှတေ့ောငျအရပျတှငျ အပငျမြားထားခွငျး၊ မွောကျအရပျတှငျ ရနှေငျ့ ပတျသကျသော အရာမြားထားခွငျးတို့သညျလညျး လာဘျရှငျစေ၏။ ခမျြးသာကွှယျဝမှုအတှကျ အကောငျးဆုံး ဓာတျကား “ရနေဂါး” ထားခွငျးဖွဈ၏။ “ရနေဂါး” ပုံသညျ လာဘျရှငျစေ၏။
ခမျြးသာအိုး (Wealth Vase)
ခမျြးသာအိုးကို မွကွေီး (သို့မဟုတျ) သတုဖွငျ့လုပျရသညျ။ မွကွေီးနှငျ့ လုပျသောအိုးဟူသညျ ကွှအေိုး သို့မဟုတျ သလငျးကြောကျ အိုးမြားဖွဈ၏။ သတုအိုးကား ကွေးနီ၊ ငှေ၊ ရှေ အိုးမြား ဖွဈ၏။ အိုး၏ တနျဖိုး ကွီးလလေေ မင်ျဂလာပိုရှိလေ ဖွဈ၏။ အိုးထဲသို့ သလငျးကြောကျ၊ နီလာ ခရမျးစသညျတို့ ထညျ့ထား၍လညျး ရ၏။ ဤခမျြးသာအိုးကို လူမမွငျအောငျ ဘီရိုထဲမှာ ဖှကျထားရမညျ။ အိမျရှတေံ့ခါးမကွီးနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ မထားရ။ ထိုသို့ထားလြှငျ ခမျြးသာကွှယျဝမှုမြားမွောပါသှားတတျသညျ။
အိမျမှထှကျသမြှရမြေားကို စုဆောငျးသိမျးဆညျးနိုငျသော ရတှေငျးတဈခု ရှိရမညျ။. ထိုရတှေငျးမှ ရမြေားက မိမိ၏ မင်ျဂလာ ရှိဆုံး အရပျ သို့ ထပျမံစီးထှကျနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးနိုငျလြှငျ အကောငျးဆုံးဖွဈ၏။ ဤအစီအရငျကို “ရနေဂါး ဂန်ျတဝငျ” နညျးဟု သုံးကွသညျ။
အနောကျအရပျတှငျ သတ်ျတု “ခြီ” ဓာတျကို ရအောငျလုပျနိုငျလြှငျ နောကျမြိုးဆကျ သားသမီးမြားအတှကျ ကောငျးသညျ။ဤနရောတှငျ အဖွူရောငျ သတ်ျတု ပစ်ျစညျးမြားထားပါ။ ခေါငျလောငျးမြားထားပါ။ ကွေးစညျထားပါ။ ကွေးစညျကို အိမျအနောကျဘကျတှကျ မကွာခဏတီးပေးပါ။
ကြားဖွူ ( White Tiger)
ကြားဖွူသညျ အိမျကို စငျေ့ရှောကျတတျသညျ။ ကြားနှငျ့တှဲဘကျက နဂါးဖွဈသညျ။ သို့သျော ကြားမရှိလြှငျ နဂါးက နဂါးအစဈမဟုတျ။ ကြားရုပျကို အိမျ၏ အနောကျဘကျခွမျးတှငျ ထားရမညျ။ အရှဘေ့ကျခွမျးသညျ အနောကျဘကျခွမျးထကျ ဘယျတော့မှ ပိုမမွငျ့စရေ။ ကြားရှိသော အခွမျးက အမွဲတမျး ပိုမွငျ့နစေရေမညျ။ နဂါးအရုပျကိုမီးထိနျထိနျထှနျးပေးပါ။ တတျနိုငျလြှငျ အိမျထဲမှာ ကြားရုပျမခြိတျဆှဲပါနှငျ့။ အနောကျဘကျခွမျးကိုစောငျ့သောကြားရုပျနှငျ့ နဂါးရုပျသညျ တကယျ့တှဲဖကျညီသော အစောငျ့အရှောကျမြားဖွဈ၏။
လသောဆညျးလညျး ( Wind Chimes)
အိမျတှငျ လသောဆညျးလညျးကို မတပျမဖွဈ တပျဆငျ ခြိတျဆှဲရမညျ။ ဆညျးလညျးမွညျသံက ဖုနျးရှကေောငျးဖွဈ၏။
ပွတငျးပေါကျမြား ( Windows)
ပွတငျးပေါကျ လုံးဝမရှိလြှငျ ဖုနျးရှမေကောငျးပါ။ ထိုနညျးတူ ပွတငျးပေါကျမြားလှနျးလြှငျလညျး မကောငျးပါ။ အိမျတဈအိမျတှငျ တံခါးနှငျ့ ပွတငျးပေါကျ အရအေတှကျ ကား ၃း၁ ဖွဈရမညျ။ တံခါးတဈပေါက ပွတငျးပေါကျ ၃ပေါကျ။ ပွတငျးပေါကျကို အပိတျအဖှငျ့ လုပျရမညျ။ အတှငျးဖှငါ့ ပွတငျးပေါကျကို ရှောငျပါ။ အိမျရှတေံ့ခါးမကွီးနှငျ့ တညျ့တညျ့တှငျ ပွတငျးပေါကျ မရှိစရေ။ တံခါးမ မှ ဝငျလာသောငှမြေား ပွတငျးပေါကျမှ တခါထဲ ထှကျကုနျ၍ မညျသညျ့အခါမှ ငှစေုမိဆောငျးမိရှိမညျ မဟုတျပါ။
ဓာတျကွီးငါးပါးအနကျ တဈခုဖွဈ၏။ သဈသားက ကွီးပှားခမျြးသာသော ဓာတျဖွဈ၍ မရှိမဖွဈရှိရမညျ။ အထူးသဖွငျ့ အိမျ၏ အရှနှေ့ငျ့ အရှတေ့ောငျအရပျတို့တှငျ သဈသား ဓာတျရှိဖို့ အရေးကွီး၏။
ဓာတျကွီးငါးပါးကို တရုတျဘာသာဖွငျ့ “ဝူခငျြး” ဟုချေါ၏။ “ဝူ” က “ငါး”ဖွဈပွီး “ခငျြး”က “ဓာတျ” ဖွဈ၏။ ရကေ ဆောငျးရာသီကို စိုးမိုး၏။ သဈသားက နှဦေးပေါကျ၊ မီးကနှေ၊ သတ်ျတုက ဆောငျးဦးပေါကျကို စိုးမိုး၏။ ရာသီနှဈခုကွား စပျကူးမတျကူးသတိပွုရမညျမှာလသောဆညျးလညျးကို အရှေ့ (သို့) အရှတေ့ောငျ အရပျတှငျမခြိတျဆှဲပါနှငျ့။ ၎င်းငျးနရောက သဈသားဓာတျနရောဖွဈသညျ။ ထိုနရောတှငျ သဈသားဆညျးလညျးခြိတျ၍ရ၏။ သတ်ျတုဆညျးလညျးမြားကို အနောကျနှငျ့အနောကျတောငျအရပျတှငျ ခြိတျဆှဲရသညျ။ ကွှဆေညျးလညျးကို အနောကျတောငျနှငျ့ အရှမွေ့ောကျတှငျ ခြိတျဆှဲနိုငျသညျ။ အိမျထဲမှ မကောငျးသောကံမြားရှိလြှငျ မောငျးထုတျလိုပါကမူ အခေါငျးပါသော သတ်ျတုငါးခြောငျးဆညျးလညျးကို သုံးပါ။ တတျနိုငျလြှငျ စတေီဘုရားပုံပါသော ဆညျးလညျးကို သုံးပါ။ ၎င်းငျးသညျ မကောငျးသော ဓာတျမြားကို ဖယျထုတျနိုငျသော စှမျးအားပိုရှိ၏။
လသေိပျတိုကျသောနရောကို ရှောငျပါ။ ဥပမာ တောငျထိပျလိုနရောမြား သို့မဟုတျ ပငျလယျကမျးခွလေိုနရောမြိုးမှာ အိမျဆောကျမနသေငျ့။
လကေသိပျပွငျးလြှငျ “ခြီ” ဓာတျကို လှငျ့ပါးပြောကျပွယျစနေိုငျ၍ ဖွဈ၏။ လပေူဖွဈစေ၊ လအေေးဖွဈစေ အိမျကို လဒေလဟောတိုကျလြှငျ မကောငျးပါ။ ထိုလဒေဏျကို ကောငျးစှာကာကှယျထားနိုငျရနျ လိုအပျ၏။ သလဲကို မွကွေီးဓာတျ စိုးမိုး၏။ ဓာတျကွီးငါးပါးနှငျ့ “ခြီ” အမြိုးအစား ငါးခုက ဆကျစပျနေ၏။
ရကေ အောကျကို စီးဆငျးမွဲဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လြှံကမြှာစိုးရ၏။ အန်ျတရာယျရှိ၏။ သဈသားက အပျေါကို ထောငျတကျ၏။ အသကျဇီဝနှငျ့ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။
မီးက အရပျမကျြနှာအားလုံးကို ပြံ့နှံ့သညျ။ အရှိနျဟပျသညျ။ ပူသညျ။ ထိနျးခြုပျရခကျ၏။ သတ်ျတုက အတှငျးကို ထိုးဖေါကျ၏။ ထကျ၏။ ခြှနျမွ၏ သုံးတတျလြှငျဆေး၊ မသုံးတတျလြှငျ ဘေးဖွဈ၏။
မွကွေီးက ဆှဲဆောငျမှုရှိ၏။ ကညြေကျ၏။ တညျတံ့၏။ အကာအကှယျပွု၏။
ဇှနျ 13, 2019 နေ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်ကဆင်ခြေဖုံးမြို့လေးက မြက်ခင်းပြင်ကျယ်နဲ့ ရေကန်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ သုံးရာသီမှန်ခန်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှန်ခန်းဆောင်ကကျယ်ပြန်တဲ့ ဂိုထောင်တံခါးပုံစံမှန်ချပ်တံခါးကြီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီးအနားက မြက်ခင်းပြင်နဲ့ ရေကန်တို့ကိုတိုက် ရိုက်သွားရောက်နိုင်တဲ့ စတိုင်လ်ကျတဲ့မှန်ခန်းဆောင်ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်: ရေချယ်နှင့် ဘရိုင်ယန်ဝေါင်၊ ခွေးလေး
တည်နေရာ: ဝေါတာဖို့ဒ်၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်
အကျယ်အ၀န်း: ၂၈၈ စတုရန်းပေ (၂၇စတုရန်းမီတာ)
ဆီယက်တယ်မြို့က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရေချယ်နဲ့ ဘရိုင်ယန်ဝေါင်တို့က မီချီဂန်ပြည်နယ်ကဆင်ခြေဖုံးမြို့လေးကစတုရန်းပေ ၁၂၀၀လောက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အတွက် နောက်ထပ်နေရာလွတ်မလိုလောက်တော့အောင် ကျယ်ဝန်းနေခဲ့ပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမြို့လေးမှာအခြေကျလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တွေ လည်းပိုတိုးပွားလာခဲ့ပြီးသူတို့အိမ်လေးမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ၊ ပါတီပွဲလေးတွေလုပ်တိုင်းကျပ်ညပ်လာတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် ခြံဝင်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အဆောင်သစ်လေးတစ်ခုထပ်တိုးချဲ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရဲ့မျက်နှာစာအသွင်ကိုပြောင်းလဲမသွားစေဖို့ အိမ်နောက်ဘက်ခြမ်းမှာပဲအဆောင်သစ်ကိုထပ်တိုးချဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Before- အိမ်ရဲ့မူလနောက်ဘက်ခြမ်းကဗီနိုင်းချပ်တွေနဲ့ ကာပေးထားပြီး၊ ဆောင်ပြင်ထုတ်ပြတင်းတစ် ခု၊ တံခါးပေါက်တစ်ခုနဲ့ မှန်ပြတင်းပေါက်နှစ်ခုတို့ပါရှိတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
After- မှန်ခန်းဆောင်သစ်ရဲ့ အမိုးအခြေကိုပင်မအိမ်ကြီးရဲ့အမိုးအခြေနဲ့ တစ်ပြေးတည်းတန်းအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။အိမ်နောက်ဘက်ခြမ်းကမူလဗီနိုင်းချပ်တွေကိုခွာယူပြီးမှန်ခန်းဆောင်သစ်ရဲ့ အပြင်ဘက်မျက်နှာစာတွေမှာ ပြန်ထည့်သုံးကာကာရံပေးထားပါတယ်။
အစပိုင်းမှာပိုင်ရှင်တွေကခေါက်သိမ်းရတဲ့ ခေါက်မှန်တံခါးတွေကိုအသုံးပြုချင်ခဲ့ပေမယ့် ကုန် ကျစရိတ်ကို ကြည့်ရသေးတာကြောင့် ဂိုထောင်တံခါးပုံစံမှန်ချပ်တံခါးကိုပဲတပ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်မှာတော့ အပူချိန် အနုတ် ၄၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ ၁၄၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိ ခံနိုင်တဲ့ သစ်ထည်ပုံစံဗီနိုင်းကြမ်းခင်းကိုခင်းကျင်းထားပါတယ်။ နွေရာသီမှာပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကျရောက်မှုနဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့ အေးစက်တဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအပူဒဏ်ခံကြမ်းခင်းတွေကအသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။
မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းဘက်နံရံနဲ့ မျက်နှာကြက်တွေကိုအဖြူရောင်သုတ်ထားပြီးအအေးဆုံးလတွေမှာလူတွေအအေးဒဏ်ခံနိုင်စေဖို့ gas heaterလည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ရေကန် ကနေဖြတ်လာတဲ့ လေပြေလေညင်းကို ရှူရှိုက်ရင်းအနားယူနိုင်စေဖို့ ဆက်တီခုံတွေလည်းချပေးထား ပြီးရေကန်ထဲကနေရေကူးပြီးပြန်လာတဲ့အခါ ခဏတဖြုတ်ထိုင်နားလို့ရစေဖို့ ရေစိုမိုးစိုခံထိုင်ခုံတွေ လည်းချထားပေးပါတယ်။
မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့ ဂိုထောင်တံခါးတွေကိုအိမ်ထဲကနေခလုတ်နဲ့ ဖွင့်နိုင်ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးရေကန်ထဲလှေစီးထွက်တဲ့အခါ လှေပေါ်ကနေတောင် အဝေးထိန်းခလုတ်နဲ့ လှမ်းပိတ်နိုင်ပြီးအ်ိမ်ပြန်လာချိန်ကျရင် အဝေးထိန်းခလုတ်သုံးပြီး တံခါးတွေကို အဝေးကနေလှမ်းဖွင့်ထားလို့ရတာကြောင့် အတော် လေးနှစ်ခြိုက်မိပါတယ်လို့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူဘရိုင်ယန်ကဆိုပါတယ်။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ မီခြီဂနျပွညျနယျကဆငျခွဖေုံးမွို့လေးက မွကျခငျးပွငျကယျြနဲ့ ရကေနျတို့နဲ့ထိစပျနတေဲ့ သုံးရာသီမှနျခနျးဆောငျလေးဖွဈပါတယျ။ ဒီမှနျခနျးဆောငျကကယျြပွနျတဲ့ ဂိုထောငျတံခါးပုံစံမှနျခပျြတံခါးကွီးတှနေဲ့ ပွုလုပျထားပွီးအနားက မွကျခငျးပွငျနဲ့ ရကေနျတို့ကိုတိုကျ ရိုကျသှားရောကျနိုငျတဲ့ စတိုငျလျကတြဲ့မှနျခနျးဆောငျဒီဇိုငျးပုံစံဖွဈပါတယျ။
ပိုငျရှငျ: ရခေယျြနှငျ့ ဘရိုငျယနျဝေါငျ၊ ခှေးလေး
တညျနရော: ဝေါတာဖို့ဒျ၊ မီခြီဂနျပွညျနယျ
အကယျြအဝနျး: ၂၈၈ စတုရနျးပေ (၂၇စတုရနျးမီတာ)
ဆီယကျတယျမွို့က တိုကျခနျးကဉျြးလေးမှာနထေိုငျခဲ့ကွတဲ့ ရခေယျြနဲ့ ဘရိုငျယနျဝေါငျတို့က မီခြီဂနျပွညျနယျကဆငျခွဖေုံးမွို့လေးကစတုရနျးပေ ၁၂၀၀လောကျ ကယျြဝနျးတဲ့ အိမျကွီးကိုပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့ကွပွီးသူတို့အတှကျ နောကျထပျနရောလှတျမလိုလောကျတော့အောငျ ကယျြဝနျးနခေဲ့ပွီလို့ ထငျမှတျခဲ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီမွို့လေးမှာအခွကေလြာခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့မိတျဆှအေပေါငျးအဖျောတှေ လညျးပိုတိုးပှားလာခဲ့ပွီးသူတို့အိမျလေးမှာပြျောပှဲရှငျပှဲတှေ၊ ပါတီပှဲလေးတှလေုပျတိုငျးကပျြညပျလာတယျလို့ ခံစားရတဲ့အတှကျ ခွံဝငျးထဲမှာ လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ကယျြပွနျ့တဲ့အဆောငျသဈလေးတဈခုထပျတိုးခြဲ့ခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ အိမျရဲ့မကျြနှာစာအသှငျကိုပွောငျးလဲမသှားစဖေို့ အိမျနောကျဘကျခွမျးမှာပဲအဆောငျသဈကိုထပျတိုးခြဲ့ဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
Before- အိမျရဲ့မူလနောကျဘကျခွမျးကဗီနိုငျးခပျြတှနေဲ့ ကာပေးထားပွီး၊ ဆောငျပွငျထုတျပွတငျးတဈ ခု၊ တံခါးပေါကျတဈခုနဲ့ မှနျပွတငျးပေါကျနှဈခုတို့ပါရှိတဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။
After- မှနျခနျးဆောငျသဈရဲ့ အမိုးအခွကေိုပငျမအိမျကွီးရဲ့အမိုးအခွနေဲ့ တဈပွေးတညျးတနျးအောငျပွုလုပျပေးထားပါတယျ။အိမျနောကျဘကျခွမျးကမူလဗီနိုငျးခပျြတှကေိုခှာယူပွီးမှနျခနျးဆောငျသဈရဲ့ အပွငျဘကျမကျြနှာစာတှမှော ပွနျထညျ့သုံးကာကာရံပေးထားပါတယျ။
အစပိုငျးမှာပိုငျရှငျတှကေခေါကျသိမျးရတဲ့ ခေါကျမှနျတံခါးတှကေိုအသုံးပွုခငျြခဲ့ပမေယျ့ ကုနျ ကစြရိတျကို ကွညျ့ရသေးတာကွောငျ့ ဂိုထောငျတံခါးပုံစံမှနျခပျြတံခါးကိုပဲတပျဆငျခဲ့ကွပါတယျ။
မှနျခနျးဆောငျရဲ့အတှငျးပိုငျးအပွငျအဆငျမှာတော့ အပူခြိနျ အနုတျ ၄၀ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျကနေ ၁၄၀ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျထိ ခံနိုငျတဲ့ သဈထညျပုံစံဗီနိုငျးကွမျးခငျးကိုခငျးကငျြးထားပါတယျ။ နှရောသီမှာပူပွငျးတဲ့နရေောငျကရြောကျမှုနဲ့ ဆောငျးရာသီရဲ့ အေးစကျတဲ့ရာသီဥတုဒဏျကိုခံရတဲ့နရောဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအပူဒဏျခံကွမျးခငျးတှကေအသငျ့လြျောဆုံးပါပဲ။
မှနျခနျးဆောငျရဲ့အတှငျးဘကျနံရံနဲ့ မကျြနှာကွကျတှကေိုအဖွူရောငျသုတျထားပွီးအအေးဆုံးလတှမှောလူတှအေအေးဒဏျခံနိုငျစဖေို့ gas heaterလညျးတပျဆငျထားပါတယျ။ ရကေနျ ကနဖွေတျလာတဲ့ လပွေလေညေငျးကို ရှူရှိုကျရငျးအနားယူနိုငျစဖေို့ ဆကျတီခုံတှလေညျးခပြေးထား ပွီးရကေနျထဲကနရေကေူးပွီးပွနျလာတဲ့အခါ ခဏတဖွုတျထိုငျနားလို့ရစဖေို့ ရစေိုမိုးစိုခံထိုငျခုံတှေ လညျးခထြားပေးပါတယျ။
မှနျခနျးဆောငျရဲ့ ဂိုထောငျတံခါးတှကေိုအိမျထဲကနခေလုတျနဲ့ ဖှငျ့နိုငျပွီးအပွငျထှကျပွီးရကေနျထဲလှစေီးထှကျတဲ့အခါ လှပေျေါကနတေောငျ အဝေးထိနျးခလုတျနဲ့ လှမျးပိတျနိုငျပွီးအိမျပွနျလာခြိနျကရြငျ အဝေးထိနျးခလုတျသုံးပွီး တံခါးတှကေို အဝေးကနလှေမျးဖှငျ့ထားလို့ရတာကွောငျ့ အတျော လေးနှဈခွိုကျမိပါတယျလို့ အိမျရှငျဖွဈသူဘရိုငျယနျကဆိုပါတယျ။
ဇှနျ 6, 2019 နေ့